अभिज्ञानशाकुन्तलम् - विकिपिडिया
शकुन्तला राजा रवि वर्माको कृति.
दुष्यन्तलाई पत्र लेख्तै शकुन्तला
राजा रवि वर्माको कृति.
अभिज्ञान शाकुन्तलम् महाकवि कालिदासको विश्वविख्यात नाटक हो ‌जसको अनुवाद प्राय: सबै विदेशी भाषाहरूमा भइसकेको छ। यसमा राजा दुष्यन्त तथा शकुन्तलाको प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलनको एक सुन्दर कथा छ । पौराणिक कथामा दुष्यन्तलाई आकाशवाणी द्वारा बोध हुन्छ तर यस नाटकमा कविले मुद्रिका द्वारा यसको बोध गराएका छन्।
यसको नाटकीयता, यसका सुन्दर कथोपकथन, यसको काव्य-सौन्दर्यले भरिएका उपमाहरु र स्थान-स्थानमा प्रयुक्त भएको समयोचित सूक्तिहरु; र यी सबैभन्दा बढकर विविध प्रसंगहरूको ध्वन्यात्मकता यति अद्भुत छ कि यी दृष्टिहरुदेखि हेर्नमा संस्कृतका पनि अन्य नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलसित टक्कर लिन सक्तैनन्; फेरि अन्य भाषाहरूको त कहना नैं के !
१ मौलिक न भएमा पनि मौलिक
३ ध्वन्यात्मक सङ्केत
मौलिक न भएमा पनि मौलिकसम्पादन
कालिदासले अभिज्ञान शाकुन्तलको कथावस्तु मौलिक छानेनन्। यो कथा महाभारतका आदिपर्वबाट लिइएको छ।हरू पद्मपुराणमा पनि शकुन्तलाको कथा मिल्दछ र त्यो महाभारतको अपेक्षा शकुन्तलाको कथाका अधिक निकट छ। यस कारण विन्टरनिट्जले यो मानेको छ कि शकुन्तलाको कथा पद्मपुराणबाट लिइएको छ। परन्तु विद्वानहरूको कथन छ कि पद्मपुराणको यो भाग शकुन्तलाको रचनाका पछि लेखिएको र पछि प्रक्षिप्त प्रतीत हुन्छ। महाभारतको कथामा दुर्वासाका शापको उल्लेख छैन। महाभारतको दुष्यन्तदेखि यदि ठीक उलटा छैन, त पनि धेरै अधिक भिन्न छ।
महाभारतको शकुन्तला पनि कालिदासको झैं सलज्ज छैन। त्यो दुष्यन्तलाई विश्वामित्र र मेनकाका सम्बन्धका फलस्वरुप भए आफ्नो जन्मको कथा आफ्नो मुखले नैं सुनाउँछ। महाभारतमा दुष्यन्त शकुन्तलाका रूपमा मुग्ध भएर शकुन्तलासित गान्धर्व विवाहको प्रार्थना गर्दछ; जसमा शकुन्तला भन्दछ कि म विवाह यस शर्तमा गर्न सक्छु कि राजसिंहासन मेरा पुत्रलाई नैं मिलोस्। दुष्यन्त त्यस समय त स्वीकार गर्न लिन्छ र पछि आफ्नो राजधानीमा फर्केर जानी-जानी लज्जावश शकुन्तलालाई ग्रहण गर्दैन। कालिदासले यस प्रकार अपरिष्कृत रूपमा प्राप्त भएको कथालाई आफ्नो कल्पनाले अद्भुत रूपमा निखार दिएकोछ। दुर्वासाका शापको कल्पना गरेर उनले दुष्यन्तका चरित्रलाई ऊंचा उठाया छ। कालिदासको शकुन्तला पनि आभिजात्य, सौन्दर्य र करुणाको मूर्ति छ। यसका अतिरिक्त कालिदासले सारा कथाको निर्वाह, भावहरूको चित्रण इत्यादि जस ढंगदेखि गरेकोछ, त्यो मौलिक र अपूर्व छ।
शकुन्तला राजा दुष्यन्तकी पत्नी थियो जो भारतका सुप्रसिद्ध राजा भरतको माता र मेनका अप्सराको कन्या थियो। महाभारतमा लेखेका छन् कि शकुन्तलाको जन्म विश्वामित्रका वीर्यदेखि मेनका अप्सराका गर्भदेखि भएको थियो जो यसलाई वनमा छोडेर चली गई थियो। वनमा शंकुतहरु (पक्षिहरु) आदिले हिंसक पशुहरुदेखि यसको रक्षाको थियो, यसैदेखि यसको नाम शकुन्तला भयो। वनमा देखि यसलाई कण्व ऋषि उठा लाए थिए र आफ्नो आश्रममा राखेर कन्याका समान पाल्थे।
एक पल्ट राजा दुष्यन्त आफ्नो साथ केही सैनिकहरूलाई लिएर शिकार खेलने निस्केका र घूम्दै फिर्दै कण्व ऋषिका आश्रममा पुगे। ऋषि त्यस समय वहाँ उपस्थित छैन थिए; यसबाट युवती शकुन्तलाले नैं राजा दुष्यन्तको आतिथ्यसत्कार गरे। त्यसै अवसरमा दुइटैमा प्रेम र फेरि गन्धर्व विवाह भयो। केही दिनहरु पछि राजा दुष्यन्त वहाँदेखि आफ्नो राज्यलाई गए। कण्व मुनि जब फर्केर आए, तब यो जानेर धेरै प्रसन्न भए कि शकुन्तलाको विवाह दुष्यन्तसित भयो। शकुन्तला त्यस समय गर्भवती भैसकेकी थिई। समय पाएर त्यसको गर्भसित धेरै नैं बलवान्‌ र तेजस्वी पुत्र उत्पन्न भयो, जसको नाम 'भरत' राखिएको छ। भन्दछन्, 'भारत' नाम 'भरत'का नाममा नैं भयो।
केही दिनहरु पछि शकुन्तला आफ्नो पुत्रलाई लिएर दुष्यन्तका दरबारमा पुगी। परन्तु शकुन्तलालाई बीचमा दुर्वासा ऋषिको शाप मिल चुका थियो। राजाले यसलाई बिल्कुल छैन चिने, र स्पष्ट कह दिए कि न त म तिमीलाई जान्दछु र न तिमीलाई आफ्नो यहाँ आश्रय दिन सक्छु। परन्तु यसै अवसरमा एक आकाशवाणी भएको, जसदेखि राजालाई विदित भयो कि यो मेरी नैं पत्नी छ र यो पुत्र पनि मेरो नैं छ। तिनलाई कण्व मुनिका आश्रमको सब कुराहरु स्मरण हो आयों र उनले शकुन्तलालाई आफ्नो प्रधान रानी बनाएर आफ्नो यहाँ रख लिए
‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’मा अनेक मार्मिक प्रसंगहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। एक त्यस समय, जब दुष्यन्त र शकुन्तलाको प्रथम मिलन हुन्छ। अर्को त्यस समय, जब कण्व शकुन्तलालाई आफ्नो आश्रमदेखि पतिगृहका लागि विदा गर्दछन्। त्यस समय त स्वयं ऋषि भन्दछन् कि मेरे जस्तै ऋषिलाई आफ्नो पालिता कन्यामा यो मोह छ भनेंजसको अनिस पुत्रीहरु पतिगृहका लागि विदा हुन्छन् त्यस समय तिनको के स्थिति होती हुनेछ।
तेस्रो प्रसंग छ, शकुन्तलाको दुष्यन्तको सभामा उपस्थित हुनु र दुष्यन्तलाई त्यसलाई पहचाननाले यिनकोर गर्नु। चौथो प्रसंग छ त्यस समय का, जब मछुआरेलाई प्राप्त दुष्यन्तका नाम वाली अंगूठी त्यसलाई देखा जान्छ। र पाँचवां प्रसंग मारीचि महर्षिका आश्रममा दुष्यन्त-शकुन्तलाका मिलन का।
शकुन्तलामा कालिदासको सबैभन्दा ठूलो चमत्कार त्यसको ध्वन्यात्मक संकेतहरूमा छ। यसमा कविलाई विलक्षण सफलता यो मिलेको छ कि त्यसले कहीं पनि कुनै पनि वस्तु निष्प्रयोजन छैन कही। कुनै पनि पात्र, कुनै पनि कथोप-कथन, कुनै पनि घटना, कुनै पनि प्राकृतिक दृश्य निष्प्रयोजन छैन। सबै घटनाहरू यो दृश्य अघि आउने घटनाहरूको सङ्केत चमत्कारिक रीतिभन्दा पहिला नैं दे दिन्छन्। नाटकका प्रारम्भमा नैं ग्रीष्म-वर्णन गर्दै वन-वायुका पाटलको सुगन्धिदेखि मिलेर सुगन्धित हो उठने र छायामा लेट्दै नैं नींद आउने लागे र दिवसको अन्त रमणीय हुनको द्वारा नाटकको कथा-वस्तुको मोटो तौरमा सूचना दे दिएको छ, जो क्रमशः पहिला शकुन्तला र दुष्यन्तका मिलन, त्यसको पछि नींद-प्रभावदेखि शकुन्तलालाई भूल जाने र नाटकको अन्त सुखद हुने सूचक छ। यसै प्रकार नाटकका प्रारम्भिक गीतमा भ्रमरहरु द्वारा शिरीषका फूलहरूलाई केही-केहीखाले चूमनाले यो सङ्केत मिल्दछ कि दुष्यन्त र शकुन्तलाको मिलन अल्पस्थायी हुनेछ। जब राजा धनुषमा बाण चढाए हरिणका पछि दौडे जा रहेका हुन्, तब केही भनें पस्वी आकर रोगर्छन्। भन्दछन्-‘महाराज’ यो आश्रमको हरिण छ, यसमातीर न चलाना।’ यहाँ हरिणका अतिरिक्त शकुन्तलातर्फ पनि सङ्केत छ, जो हरिणका समान नैं भोलीभाली र असहाय छ। ‘कहाँ त हरिणहरूको अत्यन्त चञ्चल जीवन र कहाँ तिम्रो वज्ज्रका समान कठोर बाण !’ यसबाट पनि शकुन्तलाको असहायता र सरलता तथा राजाको निष्ठुरताको मर्मस्पर्शी सङ्केत गरिएको छ। जब दुष्यन्त र शकुन्तलाको प्रेम केही र बढ्न लाग्दछ, तब नेपथ्यदेखि पुकार सुनाई पर्छ कि ‘तपस्वियो, आश्रमका प्राणीहरूको रक्षाका लागि तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यन्त यहाँ आयो भएको छ।’ यसमा पनि दुष्यन्तका हाथहरुदेखि शकुन्तलाको रक्षातर्फ सङ्केत गरिएको प्रतीत हुन्छ, परन्तु यो सङ्केत कुनैका पनि कानमा सुनाई छैन दिए; शकुन्तलालाई कुनैले छैन बचाए यसबाट स्थितिको करुणाजनकता र पनि अधिक बढ्न जान्छ। चौथो अङ्कका प्रारम्भिक भागमा कण्वका शिष्यले प्रभातको वर्णन गर्दै सुख र दुःखका निरन्तर साथ लागोस् रहने तथा प्रियका वियोगमा स्त्रिहरुका असह्य दुःखको जो उल्लेख गरेकोछ, त्यो दुष्यन्त द्वारा शकुन्तलाको परित्याग गरे जानका लागि पहिलादेखि नैं पृष्ठभूमि-सी बनाए दिन्छ। पाँचवहरु अङ्कमा रानी हंसपदिका एक गीत गाउँछन्, जसमा राजालाई तिनको मधुर-वृत्तिका लागि उलाहना दिइएको छ। दुष्यन्त पनि यो स्वीकार गर्दछन् कि उनले हंसपदिकादेखि एक नैं पल्ट प्रेम गरेकोछ। यसबाट कवि यो गम्भीर सङ्केत दिन्छ कि चाहे शकुन्तलालाई दु्ष्यन्तले दुर्वासाका शापका कारण भूलेर छोडा, परन्तु एक पल्ट प्यार गर्नका पछि रानिहरूको उपेक्षा गर्नु तिनको लागि कुनै नयाँ कुरा थिएन। अन्य रानीहरु पनि त्यसको यस मधुकर-वृत्तिको शिकार थियों। हंसपादिकाका यस गीतको पृष्ठभूमिमा शकुन्तलाका परित्यागको घटना र पनि क्रूर र कठोर जान पर्छ। यसै प्रकारका ध्वन्यात्मक संकेतहरुदेखि कालिदासले सातवहरु अङ्कमा दुष्यन्त, शकुन्तला र त्यसको पुत्रका मिलनका लागि सुखद पृष्ठभूमि तैयार गर्न दिएकोछ। इन्द्र राजा दुष्यन्तलाई अपूर्व सम्मान प्रदान गर्दछन्। त्यसको पछि हेमकूट पर्वतमा प्रजापतिका आश्रममा पहुंच्दै नैं राजालाई अनुभव हुन लाग्दछ कि जस्तै त्यो अमृतका सरोवरमा स्नान गर्न रहेका हुन्। यस प्रकारका संकेतहरुका पछि दुष्यन्त र शकुन्तलाको मिलन र पनि अधिक मनोहर हो उठ्दछ।
जर्मन कवि गेटेले अभिज्ञान शाकुन्तलम्का बारेमा भने था-
‘‘यदि तिमीयुवावस्थाका फूल प्रौढावस्थाका फल र अन्य यस्तो सामग्रीहरू एक नैं स्थानमा खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो र शान्ति पाता हो, अर्थात् यदि तिमीस्वर्ग र मर्त्यलोकलाई एक नैं स्थानमा हेर्न पाउनु चाह्दै छ भनें मेरे मुखदेखि सहसा एक नैं नाम निकल पर्छ - शाकुन्तलम् , महान् कवि कालिदासको एक अमर रचना !’’
यसै प्रकार संस्कृतका विद्वानहरूमा यो श्लोक प्रसिद्ध छ-
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्।।
इसका अर्थ छ - काव्यका जितने पनि प्रकार छन् उनमा नाटक विशेष सुन्दर हुन्छ। नाटकहरूमा पनि काव्य-सौन्दर्यको दृष्टिले अभिज्ञान शाकुन्तलम्को नाम सबैभन्दा माथि छ। अभिज्ञान शाकुन्तलम्को नाम सबैभन्दा माथि छ। अभिज्ञान शाकुन्तलम्मा पनि त्यसका चतुर्थ अङ्क र यस अङ्कमा पनि चौथो श्लोक त धेरै नैं रमणीय छ।
अभिज्ञान शाकुन्तलमा नाटकीयताका साथ-साथ काव्यको अंश पनि यथेष्ट मात्रामा छ। यसमा श्रृंगार मुख्य रसछ; र त्यसको संयोग तथा वियोग दुइटै नैं पक्षहरूको परिपाक सुन्दर रूपमा भएको छ। यसका अतिरिक्त हास्य, वीर तथा गरुण रसको पनि जहाँ-तहाँ राम्रो अभिव्यक्ति भएको छ। स्थान-स्थानमा सुन्दर र मनोहरिणी उतप्रेक्षाहरु न केवल पाठकलाई चमत्कृत गर्न दिन्छन्, किन्तु अहिलेष्ट भावको तीव्रतालाई बढाउनमा नैं सहायक हुन्छन्। सारे नाटकमा कालिदासले आफ्नो उपमाहरु र उत्प्रेक्षाहरूको उपयोग कहीं पनि केवल अलङ्कार-प्रदर्शनका लागि गरेनन्। प्रत्येक स्थानमा तिनको उपमा वा उत्प्रेक्षा अर्थको अभिव्यक्तिलाई रसपूर्ण बनाउनमा सहायक भएको छ। कालिदास आफ्नो उपमाहरुका लागि संस्कृत-साहित्यमा प्रसिद्ध छन्। शाकुन्तलमा पनि तिनको उपयुक्त उपमा चुनने शक्ति भली-झैं प्रकट भएको छ। शकुन्तलाका विषयमा एक जग्गा राजा दुष्यन्त भन्दछन् कि ‘वह यस्तो फूल छ, जसलाई कुनैले सूंघा छैनछ; यस्तो नवपल्लव छ, जसमा कुनैका नखहरूको खरहरुच छैन लगी; यस्तो रत्न छ, जसमा प्वाल छैन गरिएको र यस्तो मधु छ, जसको स्वाद कुनैले चखा छैन।’ यी उपमाहरुका द्वारा शकुन्तलाका सौन्दर्यको एक अनोखी झलक हाम्रो आंखहरुका सामुन्ने आउँछ। यसै प्रकार पाँचवहरु अङ्कमा दुश्यन्त शकुन्तलाको परित्याग गर्दै भन्दछन् कि ‘हे तपस्विनी, के तिमीत्यस्तो नैं आफ्नो कुललाई कलंकित गर्नु र मलाई पतित गर्नु चाहती हो, जस्तै तटलाई तो्डेर बग्ने नदी तटका वृक्षलाई त गिराती नैं छ र आफ्नो जललाई पनि मलिन गर्न लिन्छ।’ यहाँ शकुन्तलाको चटलाई तो्डेर बग्ने नदीदेखि दिएको उपमा राजाका मनोभावलाई व्यक्त गर्नमा विशेष रूपले सहायक हुन्छ। यसै प्रकार जब कण्वका शिष्य शकुन्तलालाई साथ लिएर दुष्यन्तका नजिक पहुंच्दछन् त दुष्यन्तको दृष्टि ती तपस्विहरुका बीचमा शकुन्तलाका माथि जाएर पर्छ। वहाँ शकुन्तलाका सौन्दर्यको विस्तृत वर्णन न गरेर कविले तिनको मुखदेखि केवल यति कहलवा दिएका छन् कि ‘इन तपस्विहरुका बीचमा त्यो घूंघट वाली सुन्दरी को छ, जो पीले पत्तहरुका बीचमा नयाँ कहरुपलका समान देखा पड रहेकोछ।’ यस साना-सी उपमाले पीले पत््दै र कहरुपलको सदृश्यताका द्वारा शकुन्तलाका सौन्दर्यको पूरा नैं चित्रांकन गरिदिएकोछ। यसै प्रकार सर्वदमनलाई देखेर दुष्यन्त भन्दछन् कि ‘यो प्रतापी बालक त्यस अग्निका स्फुलिंगको झैं प्रतीत हुन्छ, जो धधकती आगो बन्नका लागि ईधनको बाटो देख्दछ।’ यस उपमादेखि कालिदासले न केवल बालकको तेजस्विता प्रकट गर्न दी, तर यो पनि स्पष्ट रूपले सूचित गरिदिएका छन् कि यो बालक ठूलो भएर महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बन्नेछ। यस प्रकारको मनोहर उपमाहरुका अनेक उदाहरण शाकुन्तलमा देखि दिये जा सक्छौं किनभनें शाकुन्तलमा १८० उपमाहरु प्रयुक्त भएकहरु छन्। र उनमादेखि सबै एकदेखि एक बढकर छन्।
यो ठीक छ उपमाका चुनावमा कालिदासलाई विशेष कुशलता प्राप्त थियो र यो पनि ठीक छ कि तिनको-सी सुन्दर उपमाहरु अन्य कविहरूको रचनाहरूमा दुर्लभ छन्, र पनि कालिदासको सबैभन्दा ठूलो विशेषता उपमा-कौशल छैन। उपमा-कौशल त तिनको काव्य-कौशलको एक सामान्यखाले अङ्ग छ। आफ्नो मनोभावलाई व्यक्त गर्न अथवा कुनै रसको परिपाक गर्न अथवा कुनै भावको तीव्र अनुभूतिलाई जगाने कालिदास अनेक विधिहरु जान्दछन्। शब्दहरूको प्रसंगोचित चयन, अहिलेष्ट भावका उपयुक्त छन्दको चुनाव र व्यञ्जना-शक्तिको प्रयोग गरेर कालिदासले आफ्नो शैलीलाई विशेष रूपले रमणीय बनाएको दिएकोछ। जहाँ कालिदास शकुन्तलाका सौन्दर्य-वर्णनमा उतरे छन्, वहाँ उनले केवल उपमाहरु र उत्प्रेक्षाहरु द्वारा शकुन्तलाको रूप चित्रण गरेर नैं सन्तोष छैन गर्न लिया छ। पहिला-पहिला त उनले केवल यति कहलाए कि ‘यदि तपोवनका निवासीहरूमा यति रूप छ, त समझो कि वन-लताहरूले उद्यानको लताहरूलाई मात गरिदिए।’ फेरि दुष्यन्तका मुखदेखि उनले कहलाए कि ‘यति सुन्दर कन्यालाई आश्रमका नियम-पालनमा लगाउनु यस्तो नैं छ जस्तै नील कमलको पंखुरीदेखि बबूलको पेड काटना।’ त्यसको पछि कालिदास भन्दछन् कि ‘शकुन्तलाको रूप यस्तो मनोहर छ कि चाहे त्यसले मोटा वल्कल वस्त्र पहना भएकोछ, फेरि त्यो भन्दा पनि त्यसका सौन्दर्य केही घटा छैन, तर बढा नैं छ। किनभनें सुन्दर व्यक्तिलाई जो पनि केही पहना दिए जाए त्यही त्यसका आभूषण हुन जान्छ।’ त्यसको पछि राजा शकुन्तलाको सुकुमार देहको तुलना हरी-भरिएको फूलहरुदेखि लदी लताका साथ गर्दछन्, जसदेखि त्यस विलक्षण सौदर्यको स्वरूप पाठकको आंखहरुका सामुन्ने चित्रितखाले हो उठ्दछ। यसका पछि त्यस सौन्दर्यको अनुभूतिलाई चरम सीमामा पुग्योनका लागि कालिदास एक भ्रमरलाई ले आए छन्; जो शकुन्तलाका मुखलाई एक सुन्दर खिला भयो फूल समझकर त्यसका रसपान गर्नका लागि त्यसको माथि मंडराने लाग्दछ। यस प्रकार कालिदासले शकुन्तलाका सौन्दर्यलाई चित्रित गर्नका लागि अंलकारहरूको सहारा उति छैन लिया, जति कि व्यञ्जनाशक्ति का; र यो व्यजना-शक्ति नैं काव्यको जान मानिन्छ।
अभिज्ञान शाकुंतलम् (अङ्ग्रेजी र देवनागरीमा)
English translation of Abhigyaanashaakuntalam (pdfमा)
विकिमिडिया कमन्समा अभिज्ञानशाकुन्तलम् सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अभिज्ञानशाकुन्तलम्&oldid=901430" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३ सेप्टेम्बर २०२०, ०९:२७
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०९:२७, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।